I-KosmoTime: Dala Imisebenzi Ebeka Isikhathi Kukhalenda Lakho | Martech Zone
Njengomlingani ku-ejensi esebenza nezinkampani zebhizinisi, izinsuku zami ziyisiphithiphithi futhi ikhalenda lami liyisiphithiphithi - lisuka ekuthengiseni, kumasu, ekumeni phezulu, ekubambisaneni, nasemihlanganweni yabalingani engapheli. Phakathi kwazo zonke lezo zingcingo, ngidinga ukwenza empeleni umsebenzi engizinikele kuwo namakhasimende!
Into eyodwa engiyenze mathupha esikhathini esedlule kumane nje isikhathi esivinjelwe ekhalendeni lami ukuqinisekisa ukuthi ngingaqedela imisebenzi yami futhi ngitshele amaklayenti ethu. Lapho ibhulokhi lami livela, ngibheka iphedi lami elithembekile bese ngiqala ukushaya imisebenzi evelele.
Ukuphathwa KosmoTime Isikhathi
KosmoTime uhlelo lokusebenza lokuphatha isikhathi olusiza ochwepheshe ukuthi benze umsebenzi ngokubeka imisebenzi ekhalendeni ngezici zokuvimbela okuzenzakalelayo. I-KosmoTime isixhumanisi esilahlekile phakathi kokwenza umsebenzi wakho wenziwe, ukuvumelanisa lowo msebenzi nekhalenda lakho, nokuqinisekisa ukuthi azikho iziphazamiso ngenkathi uzifeza.
Batch Imisebenzi Yakho - imisebenzi ivame ukuba yizinyathelo ezincane zephrojekthi enkulu. I-KosmoTime ikuvumela ukuba uqoqe imisebenzi yakho bese uhlela isikhathi sokuqinisekisa ukuthi iphrojekthi ingaphothulwa.
Vimba Zonke Iziphazamiso - I-KosmoTime ivala amathebhu akho bese icisha izaziso zakho ze-Slack lapho uqala umsebenzi wakho. Uma usuqedile, iKosmoTime izovula kabusha wonke amathebhu nezaziso
Faka Umsebenzi kusuka ku-Chrome - I-KosmoTime ikuvumela ukuthi ubeke uphawu lokubekisa noma iyiphi i-URL bese uyiguqula ibe ngumsebenzi ngokuchofoza okukodwa kusuka i-Google Chrome. Ngemuva kwesikhathi ungayabela iSprint futhi ukwenze ngesikhathi esifanele, ngokugxila okulungile.
Gcina Ikhalenda Lakho - I-KosmoTime ihlangana ngqo nekhalenda lakho le-Microsoft noma le-Google. Faka umsebenzi noma ibhlokhi yomsebenzi, uyihudulele kukhalenda yakho, futhi ungangeza isikhathi sokuvimba isikhathi esiningi ngendlela odinga ngayo ukuze ufeze umsebenzi wakho.
Inhloso yeKosmoTime ukunika amandla abasebenzisi ukuthi bafinyelele emandleni abo okuphelele okukhiqiza, futhi ekuqhubekeni bathole ukulawulwa kwesikhathi sabo kanye nomuzwa wenkululeko yabo. s
Tags: ukumaketha okudalagoogleisikhathi-Microsoftukuphathwa komsebenziimenenja yomsebenzi
Ungayilinganisela Kanjani i-Akhawunti Yakho Yokukhangisa ye-Amazon